Home Wararka RW Rooble oo ay Talada Dalka Dhammaanteed Dusha ka Fuushay iyo Gud....
RW Rooble oo ay Talada Dalka Dhammaanteed Dusha ka Fuushay iyo Gud. Mursal oo Xaqiijiyey.
Sida ka muuqata waraaqda ka soo baxday guddoomiyaha Golaha shacbiga ee uu ku soo celiyey shuruucdii golahii shacbiga ee waqtigiisu dhammaaday hortaallay, waxaa xilka hogaaminta dalka uu dusha ka fuulay RW Rooble.
Gud. Mursal oo ammaan mudan ayaa ugu dambeynta waxaa uu soo celiyey dhammaan hindise sharciyeedyadii horyaallay Golaha shacbiga, kadib markii ay xildhibaanada aadeen doorasho ka dhaceysa degaanadooda si ay uga qeyb galaan. Ogow golahan waa kuwii ugu liitay taariikhda golaha shacbiga oo noqday kuwa jeebka ugu jira Madaxtooyada, weligoodna aan gudan xilkii loo igmaday.
RW Rooble waxaa laga rabaa inuu si degdeg ah u dhameystiro hawlaha doorashada, mana jiri karto marmarsiiyo kale oo uu ku sheegan karo waa la igula dhagan yahay hogaanka. Farmajo iyo Mursal waxaa halkaas kaga eg wixii awood hogaamineed ah, waxayna la mid yihiin shacbiga, welina lama oga inay murashaxiin yihiin iyo in kale. Gud. Cabdi Xaashi isagana maanta ayuu masiirkiisa ku xeran yahay inuu soo noqdo iyo in kale.
Murasal iyo Farmajo mid waliba markii uu qiimeeyo wixii ay noo dhimeen iskana meyraan haddii ay jiraan dembiyo qaran waxaa u furan inuu doorashada ka qeyb galaan.
RW Rooble waa inuu toos ugu sheegaa dowlad Goboleedyada inay si degdeg ah u soo dhameystiraan aqalka sare, si loogu gudbo aqalka hoose oo u baahan waqti ka dheer, kan loo baahan yahay aqalka Sare. Maamul goboleedyadana waa inaysan xagal daacinin doorashada oo ay si dhakhsa ah ugu hawl galaan.
Sidoo kale, waxaa halkaas ku dhamaaday faragelintii Faramajo oo ma jirto wax dambe oo uu ku ribeeyaa, haddii uusan rabin in xoog lagu muuqinyo isaga. Dad badan ayaa qaba in Faramajo la geliyo Xabsi guri inta doorashada laga qabanayo waayo waxaa uu mar waliba isku dayi doonaa inuu si uun u carqaladeeyo socodka doorashada isagooo isticmaalayaa Qoorqoor iyo Lafta gareen oo hadda ku haray dambiyada la qeybsan doona.
Cid waliba waxay garan kartaa dalkaan halkii uu joogi lahaa haddii:
Qoorqoor, Lafta Gareen, Guudlaawe iyo Cumar Finish rabbi uga cabsan lahaayeen dhaartii ay dadka hortiisa ka mareen oo ahayd inay danta dalka waxkasta ka hormarinayaan. Waxay dalkaan u geysteen dhaawac weyn oo lugooyo ah waana in taariikhda ay u gashaa haddii waqti loo helana loo qabsadaa.
Golaha shacbiga qabsan lahaa shaqadooda gole-shacbiyeed ee aysan noqon lahayn koox meel ugu xareysan Mursal iyo Faramajo oo waxay rabaan ka sameyn jiray, taariikhda ayaan xusi doonta.
Dalkaan mar hore ayuu doorasho aadi lahaa haddii ay daacad yihiin afartaas shakhsi iyo 329 xildhibaan, laakiin waxay mar waliba sameynayeen lugooyo iyo falal cad oo ay doorashada uga soo horjeedaan welina nadiif iskama dhigin kooxda Farmaajeysan oo ma caddeyn inay ka soo hareen Fahad iyo Farmajo oo ay doorashada daacad u qabanayaan.
Waxaa ugu dabeyntii si Sharaf leh isaga meyray wixii uu kharribay Guddoomiye Mursal waana geesinimo in uu ugu dambeyn fahmay inay sax tahay in RW Rooble lagu wareejiyo awoodda si buuxda, lagana daayo la qabsiga hogaminta doorashada iyo doc faruurka.
Waxaa haboon in Farmajo la geliyo Xabsi guri inta doorashada Baralamanka laga dhameystirayo, Rooblana uu shaqadiisa qabsadaa iska joojiyaa inuu ku mashquulo u jawaabista Farmajo.